ဟဒီးဆ်: အို-ကလေးငယ်၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ကိုတသ၍ ညာလက်ဖြင့်စားပါ၊ ၎င်းပြင် သင့်အနီးအနားက စားပါ။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အို-ကလေးငယ်၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ကိုတသ၍ ညာလက်ဖြင့်စားပါ၊ ၎င်းပြင် သင့်အနီးအနားက စားပါ။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . အစ္စလာမ့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . စားသောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အာဒါဗ် စည်းကမ်းများ။ .
အုမရ်ဗင်န် အဗူစလမဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) ၏အုပ်ထိန်းမှုအောက်၌ ရှိခဲ့သည့် ကလေးငယ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။(စားသည့်အခါ)ကျွန်တော့်၏ လက်သည် ပန်းကန်ပြားထဲ ဟိုနားဒီနား နှိုက်နေခဲ့သည်။ ထိုအခါ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က ကျွန်တော့်အား အို-ကလေးငယ်၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ကိုတသ၍ ညာလက်ဖြင့်စားပါ၊ ၎င်းပြင် သင့်အနီးအနားကစားပါဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော်၏စားသောက်ပုံသည် ထိုအတိုင်းသာအမြဲဖြစ်ခဲ့သည်။
အုမရ်ဗင်န် အဗူစလမဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ကြင်ယာတော် အုမ္မုစလမဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟာ)ဘက်မှပါလာသော သားတော်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကိုယ်တော်၏ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဤဩဝါဒတော်တွင် ၎င်းက မိမိ၏အခြေအနေကိုတင်ပြခဲ့သည်မှာ- သူသည် ထမင်းစားနေစဉ် အစားအစာယူရန်အတွက် ဘေးနားရှိ အခြားပန်းကန်များကိုလည်း လက်ဖြင့် လှမ်းနှိုက်လေ့ရှိသည်။ ထိုကြောင့် သူ့အားတမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က အစားအသောက် စားခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအနက် သုံးချက်ကို ဤဟဒီးဆ်တော်တွင်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ (၁)- စားသည့်အခါ အစတွင် ‘ဗိစ်(စ)မိလ္လာဟ်’ ဆိုခြင်း။ (၂)- ညာလက်ဖြင့်စားခြင်း။ (၃) မိမိ၏ အနီးအနားမှစားခြင်း။ အခြားသူစားနေသည့်နေရာမှ စားခြင်းသည် ယဥ်ကျေးမှု မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သာသနာ့ပညာရှင်များက အဆိုပြုကြသည်မှာ-အစားအစာသည် တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ ဥပမာ ရွှေဖရုံသီး၊ ခရမ်းသီး၊ အသား၊ စသည်ဖြင့်အမျိုးအစားများစွာရှိနေလျှင် မိမိနှင့် နီးသောအစားအစာကို စားသုံးရင်း အခြားအမျိုးအစားများကို ယူရန်လက်လှမ်းခြင်းသည် အပြစ်မဟုတ်ပေ။ ထို့အတူတစ်ယောက်တည်းစားသူသည် အခြားတစ်ဖက်မှ ယူစားလျှင်လည်း အပြစ်မရှိပေ။ ထိုသို့စားခြင်း၌ မည်သူ့ကိုမျှ ထိခိုက်စေခြင်း မရှိပေ။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ဝီဂါ ကာ့ဒ် ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ် ထိုင်း
1: စားသောက်သည့်အခါ အစတွင် ‘ဗိစ်(စ)မိလ္လာဟ်’ ဆိုခြင်းသည် စားသောက်ခြင်း၏ အဒဗ်(ကျင့်ဝတ်)များတွင် ပါဝင်သည်။
2: ညာလက်ဖြင့် စားသောက်ရန် တာဝန်ရှိပြီး ဘယ်လက်ဖြင့် စားသောက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ သို့သော် အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိလျင် ဘယ်လက်ဖြင့်စားခွင့်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ- “သင်တို့အနက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဘယ်လက်ဖြင့်စားခြင်း ဘယ်လက်ဖြင့်သောက်ခြင်း မပြုကြလေနှင့်။ ဧကန်အမှန်ပင် ရှိုင်သွာန်မိစ္ဆာသည် ဘယ်လက်ဖြင့်စား၍ ဘယ်လက်ဖြင့်သောက်သည်။” ထို့ကြောင့် ရှိုင်သွာန်မိစ္ဆာ၏ နောက်လိုက်မှုပြုခြင်း ဟရာမ်ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို အုပ်စုတစ်စုနှင့် တူဆင်အောင်ပြုပါက ၎င်းသည် ထိုအုပ်စုအနက်မှပင်ဖြစ်သည်။
3: လူကြီးဖြစ်စေ ကလေးဖြစ်စေ အထူးသဖြင့် လူတစ်ဦး၏ အုပ်ထိန်းမှုအောက်တွင် ရှိသည့် မသိနားမလည်သူအား ပညာသင်ပေးခြင်း မွတ်စ်သဟဗ် ဖြစ်သည်။
4: အစားအစာ စားခြင်း၏ အဒဗ်(ကျင့်ဝတ်) တစ်ခုမှာ လူတစ်ဦးသည် မိမိအနီးနားမှသာ စားသုံးရမည်။ အခြားဘက်များမှ ကျော်၍မယူသင့်ပေ။
5: ဆွဟာဗဟ် သာဝကကြီးများသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ သွန်သင်ဆုံးမမှုကို စွဲမြဲစွာလိုက်နာ ကျင့်သုံးကြသည်။ ဤအကြောင်းကို အုမရ်ဗင်န် အဗီစလမဟ် ပြောကြားသည့် “ထို့ကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော်၏စားသောက်ပုံသည် ထိုအတိုင်းသာအမြဲဖြစ်ခဲ့သည်။”ဟူသည့် စကားတွင် သိရှိနိုင်သည်။
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . အစ္စလာမ့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . စားသောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အာဒါဗ် စည်းကမ်းများ။ .
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی हिन्दी සිංහල ئۇيغۇرچە كوردی Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ் ไทย
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ဝီဂါ +ကာ့ဒ် +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ် +ထိုင်း